Kwete, Greta haasi kwaAntikristu | Apg29
Ndava muverengi neindaneti akatumwa kwandiri apo munyori nezvishamiso kana makore 16 okuberekwa kwezvakatipoteredza nemumiriri Greta Thunberg ndiye kwaAntikristu.
Ndakaverenga kwokutanga nhasi mupepanhau nomusi mumwe akaenzanisa okunze sangano pamwe kumutsidzirwa kufamba. Asi kutangazve kufamba kuwana tariro, izvo murege kupinda okunze sangano.
Ndava muverengi neindaneti akatumwa kwandiri apo munyori nezvishamiso kana makore 16 okuberekwa kwezvakatipoteredza nemumiriri Greta Thunberg ndiye kwaAntikristu. Kuti mubvunzo ndinogona kupindura pakarepo:
"Kwete, Greta Thunberg haasi kwaAntikristu."
Greta mukadzi. The Bible rinoti kwaAntikristu murume, saka zvokufungidzira anowira pakarepo. Hakupindirani neBhaibheri.
2 I VaT 2: 3 . Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutowo upi neupi. Nokuti iro kwete, kana marara zvakatojekeswa, uye munhu wechivi, wokurashika mwanakomana [kureva munhu], aratidzwe.
Mumwe haafaniri kutsoropodza
Ichokwadi I zvinobudisa hapana muverengi mail. Kunze mejlets zviri mumagwaro, ndingadai vachagona lynched. Uye ndicho chinhu chokupedzisira chinoshamisa. Hazvina kunge kwete kushora Greta Thunberg.
Ndakaverenga kuti murairidzi nhabvu akati zvinhu zvakapusa kwaari ikozvino kuti kudzingwa basa . Chokwadi, yaiva mutauro kukodzera, asi imi munzwisise zvandiri kureva. Kare, Ndaona Clip kubva terevhizheni American, ndinotenda akanga ari, apo vakatsoropodza musikana ane makore 16 okuberekwa uyo pakarepo vakaudza kure nomumwe nemashoko:
"Ungataura sei kushora mwana, iwe uri munhu akura?!"
Iye haasi chete mwana, asi iye anewo diagnoses matatu, wandakaisa kare kuverenga pamusoro Wikipedia , asi zvino chete inoti kuti aiva "zvikuru mwoyo uye manzwiro ruzivo nematuro," uye varo 2018 akasarudza "kuti pane kudonha shure mwoyo, uende chiito. "
Kana iwe kutsoropodza Greta inogona mhosva kushora mwana anorwara. Nenzira iyi yava matsime marudzi ose kutsoropodzwa kuzorwa racho kunhivi Greta Thunberg.
Chokwadi hakusi iye akaita kuti iye ave chaizvo kuzivikanwa, asi hazvina bokomliggande mauto uye zvoupfumi zvido.
handina kutsoropodza Greta, iye ari mwana - uye anokosha munhu - vanoda Jesu Kristu. Chii I sei zvakaipisisa ne dambudziko zvido uye masimba. Nguva yokutanga ndakaona Greta Thunberg, ndakanga zvakanaka akagumbuka.
Ipapo Greta hauzoti yakakura uye asi ini akaita saizvozvo. Hazvina kufanira kuti vezvenhau vose vari shure uye kunowirirana kuti kwaari. Uye nokuda kuti chikonzero chimwe nechimwe vanofanira kunzwisisa kuti pane chinhu chisakafanira.
Kunyange mwanasikana wangu 13 egore, ndiye Greta musi Instagram , vakafunga yake pakutaura UN akanga nyepera , uye akandiudza zvikuru nomuzvarirwo kwandiri ndisati nguva kutaura chinhu.
Saka avo shure Greta Thunberg akanga akangwara kana ivo vakatuma naye nokuti handigoni kutsoropodza mwana anorwara!
Uye iye akanga ari pamusoro zvose kuti Nobel Peace Prize fanira, vakawanda vanonzwisisa kuti nyepera. Kare mutevedzeri wapurezidhendi uye Climate nemumiriri Al Gore, vakagamuchira mubayiro nokuda vhidhiyo akaita. Ndakaverenga kuti nezvakafanotaurwa iri firimu rake nhema uye kwete kuzadziswa .
Mumamiriro ezvinhu seizvi iwe kuti iwe chete vane makore gumi iri nyika isaparare. Chete anoti Greta nevamwe vana vake vaimbova vakati chetezvo. Uye zvakaita kuti anenge 20 - makore 30 akapfuura !
Earth haangaregi pasi
Earth handingakwiri makore gumi - kwete kwemakore 20 kana 30. Saka zvose vaporofita okuparadzwa anouya nemashoko dzakadaro Bogus. Chokutanga, Jesu anofanira kudzoka, uye achaita kuJerusarema panyika ino!
Kana ivhu rabuda pasi, ipapo Jesu hapana nyika kudzokera. Naizvozvo, tinonzwisisa kuti anodudzira nezvekuguma kwenyika uprofita mhando iyi inhema.
Asi pashure Jesu akatonga panyika kwemakore ane chiuru paakadzokera, ipapo richava denga idzva nenyika itsva; Asi pachange pasina kuparadza - chichava kuberekwazve.
Munhu kunyange rakanyorwa mumagazini Kereke Greta Thunberg ari muporofita . Kwete, iye haasi muporofita. Kana iye achingove muporofita - Saka ndiye hwenhema. Muprofita anoprofita tariro muna Jesu Kristu uye kwete shoko rakadaro Greta muchadzosera vasina tariro uye ruponeso.
Zvirevo 23:18: Zvirokwazvo muri ramangwana, uye kwako tariro haangavi pasina.
Jeremiah 29: 1: Ndinoziva urongwa Ndine kwamuri, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro.
Zvirevo 24:14: Ndizvo ruzivo uye uchenjeri kumweya wako. Kana ukaona navo, iwe une ramangwana, uye tariro yako haangavi pasina.
Jeremiah 31: 1: Pane tariro nokuda kwenguva yako yemberi, 'ndizvo zvinotaura Ishe. Vana venyu vanofanira kudzokera kunyika yavo.
Ndakaverenga kwokutanga nhasi mupepanhau nomusi mumwe akaenzanisa okunze sangano pamwe kumutsidzirwa kufamba . Asi mwoto kufamba vechiKristu Jesu musimboti kuti tariro, izvo murege kupinda okunze sangano.
Asi okunze sangano rashanduka chitendero. Ndakawana vhidhiyo musi YouTube yaiti: " Green Revival | The itsva chitendero ekunze ". Lars Bern Swebb terevhizheni runhare kunyange Greta Thunberg okunze inofamba kuti anodudzira nezvekuguma kwenyika chitendero . In tumapoka, tinoziva kuti vanhu vakasungwa uye vanodzvinyirirwa, asi muna Jesu Kristu, vanhu vanosunungurwa.
Kana isu kudzokera panotangira nyaya ino, chokwadi hachisi Greta Thunberg Anopesana naKristu. Ikoko, kuverenga na aidhinda zvakanyanyisa. In email anosimudza zvakadai kusvikira Greta zita rokupedzisira ndiro 666 uye kuti ruvara kwakafanana Islamic mitema.
Asi kune rumwe ruoko anogona zvakatipoteredza sangano kuva chikamu pakuparurwa kwaAntikristu. Pane Masimba simba shure yose kwezvakatipoteredza sangano kungaita kwaAntikristu kuuya ari pachigaro. Air sangano hachisi zvachose mhosva. Mune izvi zvose, vanhu vanogona kuva tikabatwa uye kuva pawns mune yokutsoropodza. mutambo.
Kukanganisa pamusoro Order zvarinoreva
Ndingadai vanotaurawo sei kupa shoko yakasiyana. Dzimwe nguva ini verenga kuti Greta "dzidzo ranwa" kana kwave kune mubvunzo wechikoro ranwa. Nokuti sei Aigona kurova chikoro imwe nyika, dzakadai United States?
Kana kuti "Ranwa" kana "okunze ranwa". Hapana mubvunzo kuti mashoma parinouya, asi mienzaniso uye manyepo. Unofanira mudane zvinhu chii. Asi nenzira iyi vanodzvara pfungwa uye pfungwa vanhu pfungwa kuchinja navo imwe negwara.
Kumbira Greta Thunberg uye kunyengeterera vamwe vanhu vasina tariro. Nyengeterai kuti vaevhangeri uye vamwe vashumiri Jehovha achatumira kwavari kuitira kuti vanonzwa shoko raIshe Jesu Kristu mbiri kuitira kuti vanobvuma uye vaponeswe!
Matthew 9:38 . Naizvozvo kumbirai Ishe atumire vashandi mukukohwa kwake.
Neniwo kuverenga nzvimbo kuti mumiriri wechiKristu, ndinotenda akanga ari mupristi, akati kuti chinonyanya kukosha nyaya tine nhasi okunze kana zvakatipoteredza. Kwete, haisi nyaya huru. Nyaya huru iri kuti vanhu vanofanira kugamuchira Jesu uye uchaponeswa.